Handravaka ny vazy - Hevitra tonga lafatra ho an'ny tranonao | Bezzia
Fomba fanaingoana vazy
Susana godoy | 14/10/2021 14:00 | Fitaovana ao an-trano
Betsaka ny kojakoja izay tsy maintsy haingoantsika amin'ny trano, fa tsy misy isalasalana, ny ny fanaingoana vazy dia iray amin'ireo hevitra lehibe. Satria miaraka amin'izy ireo dia azonay omena anao ny fomba amam-panao na ny tantaram-pitiavana ilain'ny efitrano maro. Ankoatr'izay, amin'ny fahafahantsika mankafy famaranana marobe, dia ho hitantsika foana izay tadiavintsika.
Ka dia efa hitantsika fa, amin'ny fotoana rehetra, izy ireo no ho mpiorina voalohany ao an-tranontsika. Mazava ho azy fa anio no ho hitantsika ahoana no fomba handravahantsika vazy? satria misy hevitra maromaro azontsika jerena. Te hankafy azy rehetra ve ianao? Ka aza adino izay manaraka rehetra!
1 Ahoana ny fomba handravahana ny vazy DIY
2 Atambaro ny vazy misy haavo samy hafa
3 Vazy amin'ny lovia
4 Handravaka ny talantalana amin'ny vazy
5 Vazy porcelain
Ahoana ny fomba handravahana ny vazy DIY
Iray amin'ireo safidy lehibe ananantsika ny vazy azontsika dokoana sy hamerenantsika ny tenantsika. Matetika izy ireo dia vita amin'ny vera, na dia marina aza fa misy fitaovana hafa koa azo jerena. Ny tsara indrindra dia ny hanomezanao fiainana faharoa azy ireo ary izy ireo no mpamorona indrindra ao an-tranonao. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mitazona vazy fitaratra maro izay efa natao hosotroina, ohatra. Aorian'ny fanasana azy ireo tsara dia azonao atao ny mandoko azy ireo mitovy loko fa tsy mitovy amin'ny alokaloka, ho famaranana tena mamorona. Na dia maro aza ny olona misafidy ny fotsy ho an'ny vokatra mifanaraka amin'ny karazana haingon-trano rehetra.
Atambaro ny vazy misy haavo samy hafa
Ny iray amin'ireo filokana marim-pototra izay tianay kokoa ny mijery ny haingon-trano dia ny fitambaran'ny haavo samy hafa amin'ny vazy. Satria amin'ity fomba ity dia hankafy ny famaranana maoderina kokoa isika. Marina fa tsy mila be loatra ianao mba hahafahanao manao azy ireo hiaraka amin'ny mpivady iray na farafaharatsiny telo amin'ny toerana iray dia ho ampy ianao. Mazava ho azy, raha manana faritra midadasika ianao ary toa vitsy ny telo, dia azonao atao ny mampitombo ny roa amin'izy ireo hatrany, mba hitohy tsy ara-dalàna ny fitambarana.
Vazy amin'ny lovia
Ny afovoan-tany dia hevitra iray hafa tena tianay. Marina fa vita amin'ny voninkazo izy ireo nefa koa amin'ny vaza. Noho izany, amin'ity tranga ity dia tsy irery izy ireo fa ho lovia iray kintana amin'ny fitambarana. Tianay ny mankafy hevitra toy izao izay azonao apetraka amin'ny fidirana amin'ny trano sy amin'ny latabatra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na amin'ny efitrano fisakafoana. Miezaha manamboatra ny lovia araka ny fomban'ireo vazy na ny lokony mba hanaraka ny loko mitovy aminy. Raha mila tontolo voajanahary kokoa ianao dia mandehana miloko maivana ary mamarana amin'ny raffia na hazo.
Handravaka ny talantalana amin'ny vazy
Ny faritra talantalana izay ananantsika ny boky, sary ary fahatsiarovana rehetra amin'ny ankapobeny dia mila fanampina toa ny vaza koa izy ireo. Saingy amin'ity tranga ity dia manana safidy roa hisafidianana isika. Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny mametraka roa amin'ireo kojakoja banga ireo ary avelao ny endrik'izy ireo na ny lokony hanome azy ireo bebe kokoa na hametraka voninkazo ao anatiny. Ho an'ny famaranana tsotra sy kely kokoa, raha efa izany ny fitoeram-bokim-boky, dia tsara kokoa raha foana ireo vazy. Fa rehefa te-hanampy fifandraisana romantika eo anelanelan'ny boky tianao indrindra ianao, dia voninkazo kely amin'izy ireo no mety. Inona no tianao?
Nametraka ny tenany ho iray amin'ireo fitaovana kanto indrindra izy ireo. Satria mamoaka azy toy izany ny porselana. Fa marina fa ankoatr'izay dia afaka mihaona ihany koa ianao maodelin'ny be karazany indrindra amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy, fa tsy very iota amin'io tsiro tadiavintsika fatratra io. Ny zava-mitranga amin'ity karazana fitaovana ity dia mila filana bebe kokoa izy, noho izany amin'ity tranga ity dia mety tsy ilaina ny roa na telo, fa tena be fampisehoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Fitaovana ao an-trano » Fomba fanaingoana vazy
Torohevitra hanatsarana volo amin'ny vy toy ny pro
Vaovao momba ny literatiora izay mitondra anao any amin'ny vanim-potoana hafa